DAAWO:- Duqdii hore ee Muqdisho Thabid Abdi oo si adag u wareeray Wasiir Goodax “Waa nasiib darro dhaqanka wasiirka uu la yimi”.
May 15, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somalia, Wararka Maanta 0
Guddoomihii hore ee gobolka Banaadir Thabit Cabdi Maxamed ayaa waxa uu ka hadlay go’aankii wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullahii Goodax Barre uu ku joojiyay imtixankii u socday Ardayda sanadkaan dhameysay Dugsiyada Sare ee dalka iyo banaan baxyadii ka dhashay arinataas.
Gudoomiye Thabit ayaa go’aankii Wasaaradda waxbarashada ku tilmaamay mid nasiib daro ku ah mustaqbalka Ardayda Soomaaliyeed, waxa uuna Wasaarada waxbarashada ugu baaqay in ay muujiso dabacsanaan waxna ka badasho go’aankii ay gaartay.
Thabit ayaa kula taliyay dhinacyada ay quseyso arintaasi sida Ardayda, waalidiinta iyo Wasaaradaba in ay isku aragti ka noqdaan sida laga yeelayo Imtixaanka Dugsiyada Sare ee wasaaradda waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare ay qaadeyso, kaasi oo haatay hakad ugu jira si aan la isla waafaqsaneyn.
Guddoomiye Thabit ayaa sidoo kale dhaliyarada Soomaaliyeed ugu hanbaliyeeyay maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku asteysan 15-ka May oo maanta looga dabaal dagay magaalooyinka waaweyn ee dalka.
Hadalka Thabit ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay ay banaanbaxyo xoogan ay ka dhaceen inta badan gobolada dalka iyo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kuwaasi oo ay dhigayeen Ardaydii laga joojiyay imtixaanka dowladda ee sanadkaan kaasi oo ay hakad galisay wasaaradda waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sare.
DEG DEG+DAAWO: Imaaraadka Carabta oo shirqool halis ah u maleegtay Farmaajo & Kheyre & Qadar oo ogaatay
DEG DEG:DAAWO: Boqor Buurmadow oo ka hadlay Sarkaal lagu dilay Laascaanood shir deg deg ahna ku baaqay
WAR CUSUB+DHAGEYSO: DF oo shaacisay ineysan Somaliland hal sabab darteed doorashada 2021 uga qeyb galeyn
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo si cajiib ah utaageertay in ay isu galmoodaan dadka isku jinsiga + Sababta oo ay shaacisay.
Degdeg:- Kenya oo sii kordhisay cunaqabataynta ay ku hayso dadka Somaliyeed “Waxaa la xidhay xawaalado kuyaal Nairobi”.
DAAWO:- MD Deni ”Reer Mudug waxay ahaan jireen dad geesiyaal ah oo indha adag laakin waayihii dambe lama arko dhaqankaasi” Kaftan ka dhan ah reer mudug.
DAAWO:- Xaliimo Yareey “Villa Somalia hadii aan sii deganaado noloshayda ayaa qatar galaysa marka waa qasab inaan guuro”.
Daawo:- Dad ku dhintay daadad markale ku fatahay deegaano katirsan Somaliland + Caruur iyo duqoow la badbaadiyay.
SAWIRRO: Madaxweynaha Puntland oo Maanta kormeer sameeyay
RW Kheyre ha kala doorto Goodax Barre iyo Kumaan kun dhalinyarada Soomaaliyeed ah, ama ha bareero?
SAWIRO:- MD Deni oo xariga kajaray Dhisme muhiim ah oo ah uu dhisay Cabdiweli Maxamed Cali Gaas.